पुष्पा थपलिया सोमबार, फागुन १७, २०७७, ०६:३०
काठमाडौं- 'हैन, यो कार्टुनमा के राखेको हुन्छ हँ?, आँखा समेत झिम्क्याउँदैनन् त!,' बालाजु, नयाँबजार बस्ने ५ वर्षीया बालिका कौशिलाकी आमाले झर्किँदै थिइन्। बच्चाले एकनास कार्टुन हेरिरहेकाले टिभीमा कुनै कार्यक्रम हेर्न नपाउँदा चिन्तित थिइन् उनी।
भर्खरै तीन पूरा भएर चार वर्षमा टेक्दै छन्, स्वयम्भुका सौम्य खड्का। तर उनी कार्टुनको दुनियाँमा रमाउन थालेको एक वर्ष भइसक्यो। अहिले उनी कार्टुन नहेरी खाना खानै मान्दैनन्।
कुलेश्वर घर भएकी सात वर्षीया सनिता महर्जनको पनि हालत यस्तै छ । छोरी जतिखेरै मोबाइलमा झुण्डिन थालेपछि सनिताका बाबु प्रणयमा चिन्ता थपिएको छ। उनी भन्छन्, 'सुरुसुरुमा त छोरी मोबाइल पाएपछि झगडा नगर्ने, एक ठाउँमा बसेर मोबाइल चलाइरहने भएर छाड्यौं। केही समय त साथीहरुलाई हाम्री छोरी तिमीहरुको सन्तानभन्दा ज्ञानी भनेर फूर्ती पनि लगायौं तर अहिले तनाव भइरहेको छ।
प्रणय मात्रै होइन, उनका साथी सन्तोष मानन्धर पनि छोराका कारण चिन्तामा छन्। सुरुमा छोराले मोबाइलको स्क्रिन छुँदा पनि छोयो-छोयो भनेर खुसी भइयो, अहिले छोरोले स्क्रिन छोला कि भनेर डराउनु परेको छ।
गेमको त कुरै छोडौं, मोबाइल मात्रै चलाउनु पनि एक प्रसारको नशा हो। यो नशा बालबालिकामा मात्रै होइन, अभिभावकमा समेत बसिसकेको छ।
सन्तोषका अनुसार बच्चाले मोबाइल चलाउनुमा अभिभावककै बढी हात हुन्छ। उनले भने, 'सुरुमा छोराले मोबाइल चलाउँदा वैज्ञानिक बन्न लागेको जसरी हामी नै हौसला दिन्छौं, पछि उसैले हामीलाई पनि मोबाइल चलाउन सिकाउने हुन्छ। त्यो समयमा हामी छोराछोरीले के-के न जानेजसरी गर्वले छात्ती चौडा बनाउँछौं, त्यसैको फाइदा उनीहरु उठाउँछन्।'
आफू पनि मोबाइलमा व्यस्त हुने अनि बालबालिकालाई पनि मोबाइल खेल्न दिने अभिभावकको संख्या बढिरहेको बताउँछिन् कीर्तिपुरकी सबिता श्रेष्ठ। अभिभावकसँगै विस्तारैविस्तारै मोबाइल खेलाउने बालबालिकामा लत बस्न थाल्छ। अहिले त झनै शिक्षकले अनलाइनमा पढाउन थालेपछि नचलाउ भन्न समेत नसकेको उनको भनाइ छ।
यसरी मोबाइलको लत लागेको देख्दैमा कामेको अभिभावको मन, अहिले झन अताल्लिएको छ। कारण हो, स्कुलले समेत अनलाइनमा पढाउन थाल्नु।
एकान्तकुनाकी सुरबिना पन्तले भनिन्, 'अहिले त मोबाइल नचलाओ भन्दा पनि उल्टै सरले यस्तो हेर, उस्तो हेर भनेको छ भन्छन्। केही भन्नै सकिएन।'
परिपक्व मस्तिष्कमा समेत प्रभाव पार्ने यस्ता गेम र मोबाइलको लतले कलिलो मस्तिष्कमा कस्तो असर पार्ला त? एक बालस्वास्थ्य विशेषज्ञ भन्छिन्, 'गेमको त कुरै छोडौं, मोबाइल मात्रै चलाउनु पनि एक प्रसारको नशा हो। यो नशा बालबालिकामा मात्रै होइन, अभिभावकमा समेत बसिसकेको छ।'
उनले भनिन्, 'हामी अभिभावक आफैं पनि बिना काम मोबाइल हेरिरहने, अझै मोबाइल घरमै छाडेर गए पनि बारम्बार खल्ती छामिरहने, भाइब्रेसनको फिल गरिरहने जस्ता हर्कत गरिरहन्छौं।'
उनका अनुसार, जसरी नशालु पदार्थ सेवन गर्दा शरीरमा विभिन्न खालको असर देखिन्छ, मोबाइल चलाउँदा पनि बालबालिकाको शरीरमा त्यस्तै असर देखिन्छ।
सुरुमा मोबाइल चलाउँदा मस्तिष्कले केमिकल रिलिज गर्छ र त्यसले उनीहरुलाई खुसी बनाउने खालको हर्मोन बनाइदिन्छ। जसले गर्दा सुरुवातको समयमा मोबाइल चलाउँदा बालबालिका खुसी हुन्छन् लगातार चलाएपछि ब्रेन सुस्त हुँदै जान्छ।
'सुरुमा मोबाइल चलाउँदा मस्तिष्कले केमिकल रिलिज गर्छ र त्यसले उनीहरुलाई खुसी बनाउने खालको हर्मोन बनाइदिन्छ। जसले गर्दा सुरुवातको समयमा मोबाइल चलाउँदा बालबालिका खुसी हुन्छन् लगातार चलाएपछि ब्रेन सुस्त हुँदै जान्छ,' उनले भनिन्।
उनका अनुसार लगातार मोबाइल हेरिरहदा आँखाको मसल थाक्ने, आँसु आउने, राम्रोसँग हेर्न नसक्ने, चिलाउने जस्ता समस्या हुनजान्छ। लामो समयसम्म मोबाइल हेरिरहँदा मोबाइलबाट निस्कने रेडिसनले आँखालाई अन्धो समेत बनाउन सक्छ।
एकै ठाँउमा बसेर मोबाइल हेरेर खाना खाँदा मोटोपनको सिकार हुने, समयमा खाना नखाइदिने हुँदा बालबालिका शारीरिक रुपमा दुब्लो हुने सम्भावना पनि बढ्नसक्ने बाल चिकित्सकहरु बताउँछन्।
धेरै मोबाइल हेर्ने बानी भएका बालबालिकामा डिप्रेसनसम्म हुनसक्ने सम्भावना हुने उनीहरुको दावी छ। अलि ठूला बालबालिकाको हकमा कुरा गर्ने हो भने मोबाइलले गर्दा एक्लै बस्ने, आफ्नो परिवारको सदस्यसँग कुरा नगर्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छ।
बालबालिकाले सबै कुरा आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहसँग सिक्दै जाने हो। बाल्यकालको समय मानसिक, शारीरिक र सामाजिक रुपमा पनि विकास हुनुपर्ने समय पनि हो। तर यस्तो महत्वपूर्ण समयमा बालबालिकाले मोबाइल हेर्ने हो भने धेरै कुरामा समस्या देखिने बताउँछिन् बालमनोविज्ञ गंगा पाठक।
उनले भनिन्, 'मोबाइल खेल्न दिएपछि बोल्न जरुरी हुँदैन जसले गर्दा बालबालिकामा बोलीको विकास हुँदैन। हिँडाइमा समस्या हुन्छ। जति बालबालिकाको उमेर अनुसार विकास हुनुपर्ने हो त्यति हुँदैन।'
बालबालिकाको शरीर र मस्तिष्क विकासका लागि जति खेल्ने सक्यो, जति मानिसको हुलमुलमा रम्न सक्यो त्यति विकास हुने भएकाले पनि यसले शारीरिक तथा मानसिक समस्या देखिने पाठक बताउँछिन्। मोबाइल दिएका बालबालिका एकै ठाँउमा बसेर हेरिरहने र कसैसँग घुलमिलको मौका नपाउने हुनाले उनीहरुलाई सोसल हुन समेत असर पर्ने उनी बताउँछिन्।
कसरी छुटाउने यो लत?
लत बसेपछि मात्रै मोबाइलले विभिन्न नकारात्मक असर देखाउने गर्छ। समय मिलाएर बालबालिकालाई मनोरञ्जनका लागि मात्रै मोबाइल दिने हो भने समस्याबाट जोगिन सकिन्छ।
मोबाइलको लत बसेका बालबालिकालाई एकै पटक सामान्य अवस्थामा फर्काउन भने निकै गाह्रो हुने बाल मनोचिकित्सक पाठक बताउँछिन्। यदि तपाईँको बालबालिकामा मोबाइल चलाउने लत बसेको छ भने एकै पटक छुटाउने कोसिस नगरी विस्तारै छुटाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
समय मिलाएर बालबालिकालाई मनोरञ्जनका लागि मात्रै मोबाइल दिने हो भने समस्याबाट जोगिन सकिन्छ।
लत छुटाउँदा बालबालिकालाई मोबाइल खोसेर राखिदिने हैन, उनीहरुसँग समय बिताउने, उसका साथीहरुसँग समय बिताउन दिने, नयाँनयाँ र आकर्षक किताबहरु किनेर ल्याइदिने जस्ता कामहरु गर्न पाठकको सुझाव छ।
मोबाइलको सट्टा बालबालिकालाई अन्य खेल्ने कुरा किनिदिन पनि सकिन्छ। उनीहरुलाई चित्रहरु कोर्न दिने, कागजबाट आकर्षक हस्तकलाका सामान बनाउने वातावरण मिलाइदिने गर्नाले पनि बालबालिकाको मोबाइलको लत विस्तारै छुट्न सक्ने पाठकको भनाइ छ।
अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकाको अवस्था कस्तो भन्ने बुझ्न विद्यालय जाने चलन निकै कम छ। पाठकले भनिन्, 'आफ्ना बच्चालाई ध्यान दिन समयसमयमा उनीहरुको विद्यालय गइरहनु पर्छ।' विद्यालयले पनि मोबाइल प्रयोग गर्दा बालबालिकामा पार्ने नकारात्मक असरको बारेमा जानकारी गराउन विशेष कक्षाहरु राख्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।